जनवरी 25, 2019 जनवरी 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments निन्द्रा
हामी किन निदाउँछौं ? परम्परागत मान्यता के छ भने निद्राले हाम्रो दिमागको साथसाथै दिनभरिको व्यस्तताको कारणले थाकेको हाम्रो शरीरलाई आराम गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । तर सत्य त के हो भने, निद्राको कारणले बच्ने शक्ति करिब ५० क्यालोरी मात्र हुन्छ जुन शक्ति हामी एउटा टोस्ट खाएर प्राप्त गर्न सक्छौं । यति मात्र होइन, आर.इ.एम. चरणमा हाम्रो मस्तिष्क हामी जागिरहँदाभन्दा पनि बढी क्रियाशील हुनसक्छ भन्ने तथ्य माथि नै प्रस्तुत गरिसकिएको छ । यदि निद्रा आराम लिनको लागि होइन भने केको लागि आवश्यक छ त ? हामी किन सुत्छौं त ? हामी किन निदाउँछौं त ?
यी प्रश्नहरू जति सरल छन, यसको उत्तर खोज्न त्यति नै कठिन छ । विश्वका कुनै पनि वैज्ञानिक निद्राको खास प्रयोजनको बारेमा निष्कर्षमा पुग्न सफल भएका छैनन् । केही वैज्ञानिकहरूले निद्रालाई विकासवादको सिद्धान्तसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन । उनीहरूका अनुसार निद्रा प्राणी विकास हुने क्रममा विकास भएको एक अत्यवश्यक क्रियाकलाप हो । प्राणीहरू विकास हुने क्रममा उनीहरूको आँखाले देख्ने क्षमताको पनि क्रमश: विकास हुँदै गयो, जसको कारणले गर्दा उनीहरू विभिन्न नयाँ क्रियाकलापहरूमा व्यस्त हुन थाले ।
निन्द्राकै अर्को एक सिदान्त अनुसार दिनभरको व्यस्तताका कारण खिइएको हाम्रो शरीरलाई पुनः ताजा बनाउनको लागि हामीलाई निन्द्राको आवश्यकता पर्छ । निन्द्राले हाम्रो शरीरलाई पुनः मर्मत र शुद्ध बनाउनको लागि ठूलो भूमिका खेल्दछ । विगतका केही वर्षहरुमा यो सिद्धान्तले सफलता पाइरहेको छ । मानिस र अरु विभिन्न जीवहरुमा गरिएका थुप्रै अनुसन्धानहरुले यो सिद्धान्तलाई ठूलो बल दिइरहेका छन । केही अनुसन्धानहरुले के देखाएका छन् भने यदि कुनै मुसालाई निद्राबाट वञ्चित गराइयो भने त्यसले रोगसँग लड्ने क्षमता निकै धेरै गुमाउँन पुग्छ र केही हप्तामै त्यसको मृत्यु हुन्छ ।
अरु थुप्रै अनुसन्धानहरुले के पुस्टी गरेका छन् भने विभिन्न आरोग्यवर्धक कार्यहरु जस्तै मांसपेशीहरुको विकास, प्रोटिन निर्माण कार्य, ग्रोथ हर्मोन (Growth hormone) हरुको उत्पादन, कोषिकाहरुको र्ममत आदि अधिकांश निद्राकै अवस्थामा हुन्छन् । निद्राले शरीरको मात्र नभएर मस्तिष्कको पनि शुद्धिकरण गर्छ । उदाहरणको लागि, हामी जागिरहेको बेलामा मस्तिष्कका न्यूरोनहरुले एडिनोसिन नामक पदार्थको उत्पादन गर्छ । एडिनोसिन सबै कोषहरुमा पाइने यस्तो पदार्थ हो, जसले कोषहरुमा थुप्रै रासायनिक प्रतिक्रियाहरु सम्पन्न गर्नको लागि शक्ति प्रदान गर्दछ ।
मस्तिष्कमा एडिनोसिन थुप्रिनाको कारणले हामीलाइ थकाइ लागेको अनुभव हुने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । त्यसैले मस्तिष्कमा अत्याधिक मात्रामा एडिनोसिन थुप्रियो भने हामीलाई निद्रा लाग्छ । यसरी थुप्रिएको एडिनडोसिनलाई निद्राको समयमा हाम्रो शरीरले नष्ट गर्छ र उठ्दा हामी आफैलाई ताजा अनुभव हुन्छ । चिया र कफिमा पाइने क्याफिन नामको पदार्थले एडिनोसिनको उत्पादनलाई रोक लगाउने हुँदा चिया वा कफी खाँदा निद्रा कम लाग्ने र हामीलाई स्फूर्तिको अनुभव हुन्छ । अन्त्यमा, मानिसको आयु छोटो छ, तर हामी हाम्रो जीवनको एक तिहाइ समय सुत्नमै खर्च गर्छौ । निद्राको प्रयोजन र उद्देश्य जे भए पनि, हामी यो कुरामा विश्वस्त छौं कि निद्रा हाम्रो लागि अत्यावश्यक ­छ । त्यसैले निद्राको आवश्यकताको बारेमा जान्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
← साइन्स ओलम्पियाड प्रतियोगिता सम्पन्न, विज्ञानका प्रतिभाहरु पुरस्कृत
उपवासका फाइदाहरु र बेफाइदाहरु →